About Us | buyzimbabwedollars.com
First introduced in 1980, the Zimbabwean Dollar underwent three redenominations during its 29-year tenure as the official currency of Zimbabwe. But due to an inept and politically corrupt government that hemorrhaged money left and right, the Zimbabwe Dollar was eventually rendered worthless by runaway hyperinflation, leaving behind a trail of economic disaster and social and political upheaval that should make ANY country think twice about their monetary policy.
One offshoot of this horrible debacle was the issuance of Zimbabwean banknotes that had tragically laughable denominations, such as the Zimbabwe 100 Trillion Dollar note. It's hard to believe that the Zimbabwean government could even take themselves seriously after doing this. But if you're the kind of person that looks for a silver lining in all situations--and we truly hope that's the case--you can at least gain multi-billionaire or trillionaire status by buying some Zimbabwe currency through this site! You can truly feel like the rock star or hip-hop mogul of your choice by clocking fat stacks of Zimbabwean cash. So we've made it easy for you by giving you the wherewithal to buy Zimbabwe dollars via our search algorithms that scan eBay's product listings for the best deals on Zimbabwe currency and banknotes.
So, we hope you enjoy your visit here at BuyZimbabweDollars.com, and remember: Hyperinflation can make trillionaires out of us all!